admin, Author at Galmada.net
Lammaane isku galmooday isagoo ku sugnaa maqaayadda caanka ah ee biisaha laga iibsado ee Domino Pizza Outlet taasoo ku taalla gobolka State of Michigan ee dalka Mareykanka. Warbaahinta ayaana haatan sheegeysa in lammaanahaan digniin kama dambeys ah la siiyey isla markaana loo sheegay in laga yaabo inay wajahaan ciqaab xabsi ah. Daniella Hirst ayaa lagu […]
Sawirro: Aroosad leysay dad badan oo kasooo qeyb galay xaflada Arooskeeda
Haweenay aroosad ahayd ayaa xiligii lagu guda jiray arooskeeda sun caano ugu dartay dadkii ka qaybgalayay, halkaasoo ay ku dhinteen illaa 15 qof, waxaana arintan ay ka dhacday magaalo ku taalla dalka Pakistan. Sideed qof oo kale ayaa isbitaalka u jiifa sunta ay cabeen magaalada Multan ee dalka Pakistan kuwaasoo caloosha laga geliyey tubooyin ka […]
Dhaqaatiir dabiibayay Sayfullo Saipov oo gaari xamuul ah dad ku jiirsiiyay magaalada New York ee dalka Mareeykanka ayaa waxa ay aad ula yaabeen hadal ka soo yeeray ninkaan ka dib markii uu ka soo bogsaday dhaawac caloosha ka soo gaaray . Sayfullo Saipov oo la wareystay ayaa ugu horeyntii waxa uu dhaqaatiirta dalka Mareeykanka ka […]
Duqa magaalladda Paris, Anne Hidalgo waxay amartay in la damiyo Nalka Taawarka Caanka ee Eiffel Tower ee ku taalla Paris saacaddu markay ahayd 12:00 ee saqdii dhexe ee xalay ee xilliga Bartamaha Yurub.. Hadal qoraal oo ka soo baxay Shirkadda hawlaha ee Taawarka Eiffel Tower ayaa lagu sheegay in Codsiga Maayarka Paris ee lagu damiyey […]
Varun Dhawan filimkiisa Judwaa 2 inuu Super Hit yahay ayay shabakada Boxoffice India ku dhawaaqday madaama uu ganacsi heer sare ah sameeyay todobaadkiisa kowaad. Judwaa 2 wuxuu keenay 95.25 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa kowaad wuxuuna heestaa fursad wacan oo uu ku noqon karo Hit-ka ugu weyn iyo filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay 2017 oo […]
1. Ma jiro qof soo celin kara ammin (wakhti) ka tegtay si uu bilowgeedii u hagaajiyo, balse waxa uu awoodi karaa in uu maanta uu ka hawlgalo oo uu bilaabo si uu u hagaajiyo dhammaadkeeda. 2. Haddii quruxdu ay indhaha soo jiidato, ogow hab-dhaqanka wacanina waxa uu soo jiitaa qalbiga. Quruxdu dhabta ahi ma aha […]
Sida laga warqabo waxa maalmahan Jamhuuriyadda Somaliland ka socday hawlo lagu sahaminayo shidaalka ku duugan dhulka hoostiisa. Gobolka Daadmadheedh ayaa ka mid ah meelaha la doonayay in laga fuliyo hawshaas. Haddaba darraad ayaa waxa magaalada Oodweyne yimid qolyahii hawshan sahaminta shidaalka fulin lahaa. Qolyahan ayaa igu jiray dadka muwaadinin ah iyo kuwo caddaan oo ka […]
Abwaan Ali Sugule Cigaal ” Dun-carbeed” Alle ha u naxariisto waxa uu ahaa dayax ka dhacay ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu ahaa halyeey aragti dheer oo mar walba u taagan danta geedi-socodka ummadiisa. Waxa uu ahaa samo-wade, abwaan, mu-allif murti iyo midho toolmoon muhiibsiiya ummaddiisa, una soo bandhiga hadba wacyiga iyo wakhtiga ku soo fool leh. […]
Gabadha lagu magacaabo Denis Taylor waxa ay ka qalin jabisay waxbarashada kuleejka markii la dilayay walaalkeed Bo, muddo sanado ah ayayna ku qaadatay in ay ka sabarto walaalkeed. Sidoo kale muddo sanado ah ayay ku qaadatay in ay xabsiga kasoo siidayso ninkii dilay walaalkeed. Maalin maalmaha ka mid ah ayay Denise iyo qoyskeeda tageen dhagaysiga […]
Waxaa nagu soo badanayo codsiyada dhanka dhambaalada jaceylka ah ee ka baxay shabakada Allsiyaasad.com oo dib loosoo codsanayo, si aad u hesho waxa aad raadineysid dhanka midig ee u koreeyso eeg halka aay search ku qorantahay kaga baaro wixii ku jiro shabakada Allsiyaasad.com oo kor u dhaafaya kumanaan kun oo fariimo jaceyl ah ama kuwa […]